Bhuku Rekutanga raSamueri 14:1-52
Jonatani anorwa paMikmashi (1-14)
Vavengi vevaIsraeri vanourayiwa nyore nyore naMwari (15-23)
Sauro anoita mhiko asina kufunga (24-46)
Vanhu vanodya nyama pamwe chete neropa (32-34)
Hondo dzaSauro; mhuri yake (47-52)
14 Rimwe zuva Jonatani+ mwanakomana waSauro akati kumushandi ainge akatakura zvombo zvake: “Uya tiyambuke tiende kuvarwi vanorinda vevaFiristiya vari mhiri uko.” Asi haana kuudza baba vake. 2 Sauro akanga achigara nechekunoperera Gibhiya+ pasi pemuti wemupomegraneti* muMigroni, uye aiva nevarume vanenge 600.+ 3 (Ahija mwanakomana waAhitubhu,+ mukoma waIkabhodhi,+ mwanakomana waFiniyasi,+ mwanakomana waEri,+ mupristi waJehovha wekuShiro,+ akanga akapfeka efodhi.*)+ Uye vanhu havana kuziva kuti Jonatani akanga aenda. 4 Pakati pemikoto yaiedza kupindwa nayo naJonatani kuti anosvika kwaiva nevarwi vanorinda vevaFiristiya, pakanga paine zidombo rakaita sezino kune rimwe divi, nerimwe zidombo rakaita sezino kune rimwe divi; rimwe rainzi Bhozezi, rimwe richinzi Sene. 5 Rimwe zidombo racho raiva kuchamhembe rakamira sembiru, rakatarisa kuMikmashi, uye rimwe racho raiva kumaodzanyemba rakatarisa kuGebha.+ 6 Saka Jonatani akati kumutakuri wezvombo zvake: “Uya tiyambuke tiende kune varwi vanorinda, ivo varume ava vasina kuchecheudzwa.+ Zvichida Jehovha achatirwira, nekuti hapana chingatadzisa Jehovha kuponesa nevazhinji kana kuti nevashoma.”+ 7 Mutakuri wezvombo zvake akabva ati: “Itai zvese zvamunonzwa mwoyo wenyu uchida kuita. Endai chero kwamunoda uye ndichakuteverai kwese kunodiwa nemwoyo wenyu.” 8 Jonatani akabva ati: “Tichayambuka toenda kuvarume vacho, toita kuti vatione. 9 Kana vakati kwatiri, ‘Rambai makamira kusvika tauya kwamuri!’ tichamira patinenge tiri, torega kukwidza kwavari. 10 Asi kana vakati, ‘Kwidzai kuno muzotirwisa!’ tichabva takwidza, nekuti Jehovha achavaisa muruoko rwedu. Ichi ndicho chichava chiratidzo kwatiri.”+ 11 Vaviri vacho vakabva vabuda pachena kuti vaonekwe nevarwi vairinda vevaFiristiya. VaFiristiya vakati: “Onai! VaHebheru vari kubuda mumakomba mavanga vakahwanda.”+ 12 Saka varwi vairinda vakati kuna Jonatani nemutakuri wezvombo zvake: “Kwidzai kuno uye tichakudzidzisai chidzidzo!”+ Jonatani akabva angoti kumutakuri wezvombo zvake: “Nditevere, nekuti Jehovha achavaisa muruoko rwaIsraeri.”+ 13 Jonatani akakwidza achiita zvekubatirira nemaoko ake, mutakuri wezvombo zvake achimutevera; uye Jonatani akatanga kurwisa vaFiristiya, mutakuri wezvombo zvake achivauraya ari shure kwake. 14 Jonatani nemutakuri wezvombo zvake pavakarwisa kekutanga, vakauraya varume vanenge 20 munzvimbo yakareba inenge hafu yeeka yemunda.* 15 Vanhu vakanga vari mumusasa waiva mumunda nevarwi vese vairinda vakatya chaizvo, kunyangewo mapoka evapambi+ akatya zvikuru. Nyika yakatanga kudengenyeka, Mwari achibva aita kuti vanhu vatye zvikuru. 16 Varindi vaSauro vaiva muGibhiya+ yaBhenjamini vakaona kuti nyonganyonga yacho yaipararira kwese kwese.+ 17 Sauro akati kuvanhu vaaiva navo: “Ndapota, verengai vanhu muone kuti ndiani abva pakati pedu.” Pavakaverenga, vakaona kuti Jonatani nemutakuri wezvombo zvake vakanga vasipo. 18 Sauro akabva ati kuna Ahija:+ “Uya neAreka yaMwari wechokwadi pedyo!” (Nekuti vaIsraeri ndivo vaiva neAreka yaMwari wechokwadi panguva iyoyo.*) 19 Sauro paaitaura nemupristi, nyonganyonga yaiva mumusasa wevaFiristiya yakaramba ichingowedzera. Sauro akabva ati kumupristi wacho: “Chirega zvauri kuita.”* 20 Sauro nevanhu vese vaaiva navo vakabva vaungana vakaenda kwairwiwa kwacho, uye vakawana vaFiristiya vachiurayana nemapakatwa avo, uye nyonganyonga yacho yakanga yakakura chaizvo. 21 Uyewo vaHebheru vaya vakanga vambobatana nevaFiristiya uye vakanga vauya pamwe chete navo mumusasa, vakanga vava kudzokera kuvaIsraeri vaiva pasi paSauro naJonatani. 22 Varume vese veIsraeri vakanga vakahwanda+ munyika ine makomo yaEfremu vakanzwa kuti vaFiristiya vakanga vatiza, uye naivowo vakabatana nevamwe pakuvadzingirira muhondo yacho. 23 Saka Jehovha akaponesa Israeri zuva iroro,+ uye hondo yacho yakaramba ichirwiwa kusvika kuBheti-avheni.+ 24 Asi varume veIsraeri vakaomerwa chaizvo zuva iroro, nekuti Sauro akanga asunga vanhu nemhiko iyi: “Munhu anodya chekudya* zuva risati radoka uye ndisati ndatsiva vavengi vangu ngaatukwe!” Saka hapana munhu akadya.+ 25 Vanhu* vese vakapinda musango, uye maiva neuchi pasi. 26 Vanhu pavakapinda musango, vakaona uchi huchidonha, asi hapana aiisa ruoko rwake pamuromo wake kuti ahuravidze, nekuti vaitya mhiko yacho. 27 Asi Jonatani akanga asina kunzwa baba vake pavakasunga vanhu nemhiko,+ saka akatambanudza tsvimbo yaaiva nayo, akainyika muzinga reuchi nekwainoperera. Paakadzosa ruoko rwake kumuromo wake, maziso ake akabva apenya.* 28 Mumwe wevanhu vacho akabva ati: “Baba vako vasunga vanhu nemhiko yakasimba vachiti, ‘Munhu anodya zvekudya nhasi ngaatukwe!’+ Ndokusaka vanhu vaneta chaizvo.” 29 Zvisinei, Jonatani akati: “Baba vangu vaunza dambudziko rakakura panyika. Onai kupenya kwaita maziso angu nekuti ndaravira uchi uhwu hushomanana. 30 Zvingadai zvabatsira chaizvo kudai nhasi vanhu vadya vakasununguka+ zvavapamba kuvavengi vavo! Nekuti pangadai paurayiwa vaFiristiya vakatowanda kupfuura vaurayiwa.” 31 Vakaramba vachiuraya vaFiristiya zuva iroro kubva kuMikmashi kusvika kuAijaroni,+ uye vanhu vakaneta chaizvo. 32 Saka vanhu vakava nemakaro vakatanga kumhanyira zvinhu zvavainge vapamba, uye vakatora makwai nemombe nemhuru, vakazviurayira pasi, uye vakadya nyama pamwe chete neropa.+ 33 Saka Sauro akaudzwa kuti: “Vanhu vari kutadzira Jehovha nekudya nyama pamwe chete neropa.”+ Iye akabva ati: “Maratidza kusatendeka. Kungurutsirai dombo guru kuno kwandiri izvozvi.” 34 Sauro akabva ati: “Pindai muvanhu muti kwavari, ‘Mumwe nemumwe wenyu anofanira kuuya nemombe yake negwai rake, ozviurayira pano odya. Musatadzira Jehovha nekudya nyama pamwe chete neropa.’”+ Saka mumwe nemumwe wavo akauya nemombe yake usiku ihwohwo akaiurayira ipapo. 35 Uye Sauro akavakira Jehovha atari.+ Iyi ndiyo yaiva atari yekutanga yaakavakira Jehovha. 36 Sauro akazoti: “Ngatiteverei vaFiristiya usiku, tivapambe kusvikira kwaedza. Hapana kana mumwe chete watichasiya ari mupenyu.” Vanhu vakabva vati: “Itai chero zvamunoona kuti ndizvo zvakanaka.” Mupristi akabva ati: “Ngatibvunzei Mwari wechokwadi pano.”+ 37 Sauro akabvunza Mwari kuti: “Nditevere vaFiristiya+ here? Muchavaisa muruoko rwaIsraeri here?” Asi Mwari haana kumupindura zuva iroro. 38 Saka Sauro akati: “Huyai pano, imi mese vakuru vevanhu, mutsvage kuti chivi chipi chaitwa nhasi. 39 Nekuti chokwadi naJehovha mupenyu, uyo akanunura Israeri, kunyange kana ari Jonatani mwanakomana wangu, anofanira kufa.” Asi hapana akamupindura pavanhu vese. 40 Akabva ati kuvaIsraeri vese: “Imi muchange muri kune rimwe divi, uye ini nemwanakomana wangu Jonatani tichange tiri kune rimwe divi.” Vanhu vakabva vati kuna Sauro: “Itai chero zvamunoona kuti ndizvo zvakanaka.” 41 Sauro akabva ati kuna Jehovha: “Haiwa Mwari waIsraeri, pindurai neTumimu!”+ Jonatani naSauro vakabva vabatwa, vanhu vakawanikwa vasina mhosva. 42 Saka Sauro akati: “Kandai mijenya+ kuti musarudze pakati pangu nemwanakomana wangu Jonatani.” Uye Jonatani akabatwa. 43 Sauro akabva ati kuna Jonatani: “Ndiudze, waitei?” Saka Jonatani akamuudza kuti: “Ndangoravira uchi hushomanana nekunoperera tsvimbo iri muruoko rwangu.+ Ndiri pano! Ndiurayei zvenyu!” 44 Sauro akabva ati: “Mwari ngaandirange zvinorwadza kwazvo kana ukasafa, iwe Jonatani.”+ 45 Asi vanhu vakati kuna Sauro: “Jonatani anofanira kufa here iye aita kuti vaIsraeri vakunde zvikuru kudai?+ Hazvimboiti! Chokwadi naJehovha mupenyu, hapana kana bvudzi remusoro wake rinofanira kuwira pasi, nekuti abatsirwa naMwari pane zvaaita nhasi.”+ Saka vanhu vakanunura* Jonatani, uye haana kufa. 46 Sauro akabva arega kutevera vaFiristiya, uye vaFiristiya vakaenda kunyika yavo. 47 Sauro akasimbisa umambo hwake pavaIsraeri, uye akarwisa vavengi vake vese kumativi ese, akarwisa vaMoabhi,+ vaAmoni,+ vaEdhomu,+ madzimambo eZobha,+ nevaFiristiya;+ uye aivakunda kwese kwaaienda. 48 Akarwa neushingi akakunda vaAmareki+ uye akanunura vaIsraeri muruoko rwevaivapamba. 49 Vanakomana vaSauro vaiva Jonatani, Ishivhi, naMariki-shua.+ Uye aiva nevanasikana vaviri; mukuru wacho ainzi Merabhu+ uye mudiki wacho ainzi Mikari.+ 50 Mudzimai waSauro ainzi Ahinoamu mwanasikana waAhimaazi. Mukuru weuto rake ainzi Abhineri+ mwanakomana waNeri, hama yababa vaSauro. 51 Kishi+ ndiye aiva baba vaSauro, uye Neri+ baba vaAbhineri akanga ari mwanakomana waAbhieri. 52 Mazuva ese aSauro paiva nekurwisana kunotyisa nevaFiristiya.+ Sauro paaiona chero murume akasimba kana ane ushingi, aimutora kuti ave murwi wake.+
^ Kureva urefu hwenzvimbo inogona kurimwa nechipani chemombe zuva rimwe chete.
^ ChiHeb., “pazuva iroro.”
^ ChiHeb., “Dzosa ruoko rwako.”
^ ChiHeb., “Nyika.”
^ Kana kuti “iye akabva ava nesimba.”
^ ChiHeb., “vakadzikinura.”